Sinika ingqalelo kwi-horoscope ye-2010 yeLo ngenyanga. Uya kufunda ezininzi ezinomdla kwiqaku lethu.
Uthando noThabano lvov
Ukususela ngomhla wama-22 ukuya ku-30 ​​kuSeptemba. NgoSeptemba 22, ungabonakali ngamanyathelo omthandayo ngothando, ukuze ungasabikho into emnandi. Iintsuku ezilungileyo zothando kunye nemihla yokuthandana - Septemba 24 no-25. NgoSeptemba 29 no-30 ziya kuba phantsi komqondiso wokufumanisa ubudlelwane kunye nomlingane-kuba nomonde. Ukususela ngo-1 ukuya ku-10 Oktobha. Kwimiba yobudlelwane obusondeleyo, ixesha lokudinga iingcinga kunye nokulahla "iiglasi ezikhanyayo" ziqala. Ayikho into embi kakhulu, into ephambili ayikuzikhohlisa. Oktobha 2 yinto enomdla wokuthandana. Ixesha lokungaqondi kakuhle kwiintsapho zomtshato liphelile: awuyi kuba neentloni malunga nomnye kwaye uya kuba nako ukunxibelelana ngokuthula. Ukususela ngo-11 ukuya ku-22 Oktobha. Le mihla unokuqhelana nomntu ovela kude-oku kuya kuba yinto yokuqala yokuqhelana, ukuqala kweenkcukacha okanye umhlangano wakho omfutshane wokuqala. Uphuhliso oluphambili lwezi ganeko luya kwenzeka ngonyaka ozayo. Ngo-Oktobha 13-14, ufuna "ukutsala ingubo phezu kwakho," kwaye oku akunakuthanda isiqingatha sakho. Iintsuku ezintle zokuthanda nokutyelela ngo-Oktobha 21-22. Umhla wobuRoma. Vumela ukuba uhambe ufike kusasa, umzekelo, kwi-disco evulekile epakini, ngasemngceleni wamanzi. Ukukhazimla kwezibane nokudanisa de ukuwa kuya kukhunjulwa ixesha elide, ngakumbi ukuba ukhethiweyo wakho naye ungowomzimba womlilo kwaye ukulungele ukwabelana nawe ngesimo somlilo.
Imicimbi yentsapho iya kuhamba kakuhle, kwaye, nangona ubunzima bebujamelene nayo, uya kubanqoba ngokucokisekileyo. Indlu nentsapho zibiza, kodwa ziza kuwe, kwaye uya kuvuya ukutyalo-mali kwilungiselelo "yengonyama yengonyama". NgoSeptemba 22 no-23, ngo-Oktobha 19 no-20, iintsuku ezifanelekileyo zokuthetha nabazali, izalamane eziseduze, ukufumana iindwendwe kunye nokusebenza ekhaya. NgoSeptemba 24-25, nikela ingqalelo kubantwana - baye balinda ixesha elide. NgoSeptemba 30, kuya kubakho ukudibana kunye nomlingane; ube nomonde, kwaye uya kukwazi ukuphephelela ingxabano.
Zama ubuncinane iintsuku ezimbalwa ukuba ubalekele kwimizi yeso sixeko kwaye ube yedwa nawe kwilizwe, kwindalo okanye kwenye indawo eyimfihlo. Oku kubaluleke kakhulu kwiintsuku zokuphela kwelanga (kuya kubakho ngo-Oktobha 11, xa kuyimfuneko ukugcina ukulawulwa kombuso). Yichitha iintsuku ezimbalwa ukuba ushwankathe iziphumo ezibalulekileyo, ushiye indlela yokuziphatha engaphelelwe yisikhathi, cwangcisa iinjongo ezintsha. Ukuhlaziywa kuyo yonke into i-motto yakho ngeli xesha. Indawo yamandla. Ukugqithwa kolwandle okanye umlambo phantsi kweemitha zelanga - beka ubuso bakho ekukhanyeni, uzuze iibhanki kunye neechts ezihamba emanzini.
Umsebenzi kunye neengonyama zemali
Kuza kuba nomsebenzi omningi, kwaye uya kuguqula kuyo ngentloko yakho. Imisebenzi ebaluleke kakhulu iya kugqitywa emva kokuphela kwelanga ngoSeptemba 26 - ngoko kuya kwenzeka ukuba uqhubeke nesenzo. Hlela izinto eziphambili kwiimali kunye neendlela ezifanelekileyo kuzo zonke iindleko. Unokufumana ngokuthatha inxaxheba kwiprojekthi ehlobene nelizwe langaphandle okanye ukufundisa. NgoSeptemba 26-27 uzama ukungabambisani nabaphathi bakho kunye nabo osebenza nabo: ukuphela kwelanga kungathintela wonke umntu kwaye kubangele ukunyuka kwemizwa engadingekile. Iintsuku ezikhethiweyo zokuthetha kunye nolawulo okanye udliwano-ndlebe-ngo-Oktobha 6 no-7. Ukuthenga inyanga. Yonke into ephambili endlwini - ifenitshala, izinto zangaphakathi kunye nezinto zokuyila, izinto.
Nangona yonke i-Leo idlala ixesha elide lokuthanda ubudlelwane, umsebenzele ngoku ngoku kuqala. Umgca omnyama owawufihla ubomi bakhe buphelile. NgoSeptemba 24, ngo-Oktobha 21 no-22 ziintsuku ezilungileyo zokuhanjelwa ngothando, ngelo xesha uya kufuna nje uthando kunye nokuzonwabisa.
Ukuba uthe wenza nayiphi na imidlalo okanye nje ukwenza umzimba, uya kuzuza kuphela. Unokuthabatha ixesha kwimpilo, uphumelele uviwo olubanzi, qalisa unyango. Ugxininiso oluphambili kwiindlela zokuphila eziphilileyo, ukungavumi kokugqithiseleyo kwisondlo kunye nokuphumla.
Imicimbi yezemali ayimbi, wakwazi ukuphumelela ukuzinza. Amashishini kunye namaqabane angaphandle aza kuphumelela. Ukufikelela kweengozi zemali ku-Oktobha 2, kodwa kwiinyanga ezili-9 ezilandelayo kufuneka uqaphele ukuba ungabandakanyeki kwiintengo zemali kunye neentengo zemboleko.
Kuya kuba nemisebenzi emininzi, kwaye kungenzeka ukuba emva kokuphela kwenyanga ku-Septemba 26 uya kufumana iziphakamiso ezibalulekileyo. Ekugqibeleni isigqibo malunga nokukhethwa koqeqesho olululo. Ngomsebenzi wakhe, "ukukhanya okuluhlaza" kuyatshisa kuye, kwaye yonke into incike kwimigudu yakhe.
Ixesha liqala xa intanda yakho iyakwazi ukuhlangabezana nabahlobo abatsha. Usuku olungileyo lomhlangano ngo-Oktobha 9. Imicimbi yabahlobo iya kumthabatha inyanga zonke, uya kubanceda bazisombulule iingxaki ezahlukeneyo. Kuya kuba nzima kuVirgo no-Aries, kunye neCarcer kunye neSagittarius-kulula.
Ukususela ngomhla we-8 ukuya kwe-13 ku-Oktobha, sebenzisa iintsuku ezihlalisayo, phumula, zikhuphe kwiintlungu. Kunokwenzeka kwaye kuyimfuneko ukuhamba, kodwa ngoku ngoku yonke iindwendwe ezinokude zihlala zikwinqanaba lezicwangciso eziza kuzaliseka, kodwa kamva.
I-Horoscope ngo-Matshi ngempawu ze-zodiac
I-Horoscope yonyaka wonke, i-scorpion
Unyaka we-tiger, i-horoscope yentlanzi
IHoroscope yeVirgo ngo-2011
IHoroscope ngo-2010 nge-Aquarius-Abasetyhini
I-Horoscope yeentlanzi ze-tiger ngo-2010
Unyango lwe-infertility nge-IVF
Yisiphi isizathu sokunyanzela kwentsha kunye nendlela yokuziphepha?
Ukuvakaliswa kwezipikili: umququzelelo omhle ekupheleni konyaka we-2016
Kungcono kakhulu ukunqoba isango?
Indlela yokulima iinanphaphu ekhaya
Inkukhu edlalwa ngamatye
UYulia Snigir ukhulelwe nguYevgeny Tsyganov?
Indlela yokufundisa kakuhle umntwana omncinci
I-pie yangaphakathi kunye nebhekoni kunye noshizi
Indlela yokudweba inhlanhla kunye nezilwanyana zabantu
Veal nge quince
Porridge kwiindawo ezininzi
Inkukhu ethosiweyo kwi-batter kathathu